Izindaba - Uhlelo Lokucwaninga Nokulawulwa Kokulawulwa Kwezingulube zase-Afrika, iChinese Academy Yezolimo Yezolimo (2018-2022)
I-2019 Nian 5 Yue 24- Ri, iChinese Academy of Agricultural Science research briefing imemezele "uhlelo lokucwaninga nokulawula izingulube zase-Afrika". Ngemuva kokuvela kobhadane lwe-swine fever yase-Afrika, i-Chinese Academy of Agricultural Sciences yathatha ukuvimbela nokulawula i-swine fever njengomsebenzi omkhulu wocwaningo lwesayensi ukufeza izidingo zamasu kazwelonke, yaqoqa izinsiza eziphakeme, futhi yasungula ubuchwepheshe be-swine fever bokuvikela nokulawula i-African technology iqembu lephrojekthi yocwaningo ngesikhathi sokuqala eHarbin Veterinary Research Institute. , Lanzhou Veterinary Research Institute, Beijing Animal Husbandry and Veterinary Research Institute, Shanghai Veterinary Research Institute, Lanzhou Animal Husbandry kanye neVeterinary Medicine Research Institute, i-Feed Institute, njll njengamalungu amayunithi, aqoqa amaqembu akwazi ukwenza amaqembu amakhulu ocwaningo, futhi ahlinzeke ngokuzinzile ukwesekwa ngemali yesayensi nobuchwepheshe yokwakha iphrojekthi yokuthuthukisa imishanguzo Njengephuzu elisemqoka, imini nobusuku, imini nobusuku, ukwenza ucwaningo ngokuhlanganyela lwezesayensi nezobuchwepheshe emithini yokugoma, izindlela zokugoma, izivivinyo zokuxilonga, ukubulala amagciwane nobuchwepheshe bezinambuzane. Njengamanje, umuthi wokugoma we-swine fever wase-Afrika owenziwe ngokuzimela yi-Harbin Veterinary Research Institute uthole imiphumela ehleliwe, kanti imiphumela yocwaningo lwaselebhu ikhombisile ukuthi inemiphumela emihle yokuphepha kwemvelo kanye nokuvikela amasosha omzimba.
1. I-African swine fever eyedluliselwe embonini yezingulube yaseChina yabangela usongo olukhulu kakhulu. I-China yizwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni ekusetshenzisweni kwengulube nasekufuyweni kwezingulube. Ukukhiqizwa kwezingulube minyaka yonke kungaba yizigidi ezingama-700. Inani lokukhishwa kwemboni yokuzalanisa izingulube lilinganisa i-18% yenani eliphelele lokukhishwa kwezolimo, kanti ukusetshenziswa kwengulube kubanga ama-62% esamba sokusetshenziswa kwenyama. I-African swine fever ingumbulali wokuqala embonini yezingulube. Ayikho imishanguzo yokugoma futhi ayikho imishanguzo yokuyivimba nokwelapha. Ngokuya ngezimpawu zobhubhane ze-African swine fever emhlabeni jikelele kanye nesimo samanje sokufuya kwezingulube eChina, isimo sobhadane sizoqhubeka nokukhula ezweni lami futhi sizoba khona isikhathi eside. Ukuqhubeka okuqhubekayo kwe-swine fever yase-Afrika kuzoba nomthelela omubi embonini yezwe lami yokufuya izingulube, kuthinte kakhulu ukuphepha kokudla nezondlo ezweni lami, ukunqoba impi enzima yokulwa nobuphofu ezindaweni zasemakhaya, kanye nentuthuko ezinzile yomnotho nomphakathi.
2. Ukuntuleka kokuvuthwa, ukuxhasa uhlelo olunzulu lobuchwepheshe bokuvikela nokulawula. Njengamanje, umthombo wesifo esiwumqedazwe se-African swine fever eChina nokusabalala kwaso eChina kusacacile. Ingalawulwa kuphela ngezinyathelo eziphelele njengokukhipha nokubulala amagciwane. Isizathu esikhulu salo mphumela ukuthi iChina njengamanje ayinazo izimo zangempela zokukhiqiza ezifanele izwe. , Uhlelo oluvuthiwe noluphelele oluhlanganisiwe lokuvikela nokulawula ubuchwepheshe, kanye namazinga obuchwepheshe bokuxilonga kanye nemithi yokugoma ephumelelayo nethembekile, lokhu kulethe ubunzima obukhulu ekuvimbeleni nasekulawuleni i-African swine fever. Ngakho-ke, kunesidingo esiphuthumayo sokuhlanganisa amabutho akhona ocwaningo lwesayensi, aqinise ucwaningo ngokuhlanganyela, athuthukise ukusebenza okuphezulu kanye nemikhiqizo yezobuchwepheshe yokuthola ngokushesha, athuthukise ukusebenza kahle kwe-disinfection kanye nemikhiqizo yezobuchwepheshe bezinambuzane, adlule emgodleni wocwaningo lwe-African swine fever vaccine njengoba ngokushesha okukhulu, futhi wakhe imishanguzo evikelekile nephumelelayo yokuvikela nokwelashwa. Ukuvinjelwa nokulawulwa kwesikhathi eside komqedazwe we-swine fever e-China kudlale indima ebalulekile yokusekela ngokwesayensi nakwezobuchwepheshe.
Sibheka izidingo zamanje zobuchwepheshe zokuvikela nokulawula ngempumelelo ubhadane lwe-swine fever e-Afrika, sizoqhuba ucwaningo lwesayensi nobuchwepheshe oluvela ezicini ezintathu: ukuxilongwa kusenesikhathi komthombo walobhadane, ukunqanyulwa okusebenzayo kochungechunge lokudluliswa kobhubhane, nokwakhiwa kodonga lokuvikela ubhubhane. Nemikhiqizo yezobuchwepheshe bezinambuzane, yakha imishanguzo yokuvimbela nokulawula imikhuhlane yase-Afrika, futhi inikeze ukwesekwa kwezesayensi nezobuchwepheshe ekulawuleni ngempumelelo nasekuhlanzeni ubhadane lwe-swine fever eChina.
Umzila wobuchwepheshe jikelele
( 1 ) I-R & D yemikhiqizo yezobuchwepheshe eqinisekisa umthombo wokuxilongwa kwesifo ngokushesha ngangokunokwenzeka ukwakha isixazululo esihlanganisiwe sokuxilongwa esizeni ;
( 2 ) Thuthukisa imikhiqizo yobuchwepheshe be-disinfection esebenza kahle futhi engayilimazi imvelo kanye nemikhiqizo yobuchwepheshe bezinambuzane ukwakha isixazululo sokubulala ngempumelelo ama-vectors asendle e-African swine fever ;
( 3 ) Dala imikhiqizo yobuchwepheshe yokwakha izindonga zokuvikela ubhubhane ukuhlinzeka ngosizo lobuchwepheshe ekuvikeleni esifundeni noma ekuhlanzweni kwe-African swine fever. Kwakha uhlelo lobuchwepheshe oluhlaza futhi olusebenzayo oluphelele lokuvikela nokulawula i-African swine fever.
( 1 ) Cwaninga ngendlela yokuzivikela yegciwane lengulube lase-Afrika
1. I-Mechanism icindezele ukusabela kokuzivikela komzimba kwe-African swine fever virus
2. Izindlela zokuphendula zegciwane le-African swine fever ziphazamisa amaseli wokuvuvukala
3. Umshini wokubamba ukubekezelelana kwamagciwane okubangelwa igciwane le-swine fever lase-Afrika
( 2 ) Ukuxilonga nokuhlola ubuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa komkhiqizo
1. Okwethu I-ASFV Izici zamangqamuzana obunzima besi sifo
2. I-R & D I-ASFV ubuchwepheshe bokuxilonga nemikhiqizo ehlobene nayo
( 3 ) Ubuchwepheshe begciwane kanye nentuthuko yomkhiqizo
1. Ucwaningo olusebenzayo, olunobungani bemvelo lwezokwelapha kanye nokubulala amagciwane kwe-chlorine dioxide kwemvelo
2. Igwebu le-veterinary quaternary ammonium compound igciwane elakhiwe nezilwane
3. Ucwaningo lwezilwane lwe-Hypochlorite lokubulala amagciwane kanye ne-acidic kancane
4. Inhlanganisela yezilwane eyenziwe nge-potassium sulphate ngokusebenzisa isibulala-magciwane
5. Ukuhlola nokusetshenziswa kwe-virus ethile ye-African swine fever virus
( 4 ) Ubuchwepheshe bokulawulwa kwezinambuzane nokuthuthukiswa komkhiqizo
1. Ucwaningo lweMedia biota, izifundo kanye nezici zebhayoloji yamasu amasiko okufakelwa
2. Ama-biological agents okubulala nobuchwepheshe bokuhlola izidakamizwa
3. Ukuthuthukiswa kobuchwepheshe kanye nokusetshenziswa kokulawulwa kwezinto eziphilayo
4. Isicelo sokubulala izinambuzane kanye nobuchwepheshe bokuhlanganiswa
( 5 ) Ukudalwa komuthi wokugomela ukususwa kofuzo
( 6 ) Ukudalwa komuthi wokugoma othwala bukhoma
Iyunithi yokuhola: Ucwaningo lweHa Beast
Abahlanganyeli: Lan Veterinary, Shanghai Veterinary, Lanmu Pharmaceutical, Beijing Animal Husbandry, Okuphakelayo
Isikhathi Iposi: Jun-21-2019